Weerar Askar Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Dalka Yemen. – Bogga Calamada.com
Wararka ka imaanaya dalka Yemen waxey sheegayaan in weerar qorsheysan lagu dilay Sarkaal sare oo ka tirsanaa Maleeshiyada Xuuthiyiinta xilli uu ku sugnaa qeybo kamid ah gobalka Ib ee dhaca Konfurta dalkaasi.
Sarkaalka la dilay oo magaciisa lagu sheegay Sadaam Muxyadiin ayaa ahaa madaxii Arimaha Bulshada Maleeshiyada Xuuthiyiinta ee Gobalka Ib kaasi oo lagu dilay qarax Miino.
Qoraal kasoo baxay Mujaahidiinta Ansaaru Shareecah ayey ku sheegteen mas’uuliyada weerarkaan, waxa ayna sheegeen in qaraxan lagu dilay sarkaalka iyo Laboa kamid ah istaafkiisa khaaska ah, sidoo kalena lagu dhaawacay ilaa Saddex askari oo kale.
Isla wadanka Yemen weerar kale oo ka dhacay gobolka Abyan waxaa lagu dhaawacay tiro askar ah oo katirsan Maleeshiyada loo yaqaan Xazaam Alamni ee Imaraatku tababaray.
Weerarkaan oo loo adeegsaday qarax miino ayaa ka dhacay Mandiqadda Buuraleyda ah ee Khabrul Maraaqishah oo ka tirsan Wilaayada Abyan oo dhacda koofur Bari wadanka yemen.
Inta la xaqiijiyey Sagaal ka tirsan maleeshiyada Xazaam Alamni ayaa ku dhaawacmay weerarkaan qaraxa ah oo haleelay gaari Cabdi bile ah oo ay la socdeen.
Mujaahidiinta Alqaacida ayaa tiro dhowr jeer ah mandiqada kula dagaalamay Maleeshyada xazaam alamni oo isku dayey inay dhulka buuraha ah horey usoo galaan balse dhamaan isku dayadaasi ayaa fashil kusoo dhamaaday, waxaana cadawga lagu gaarsiiyey khasaare xoogan.